Android Oreo na -amalite iru Moto G5 na G5 Plus | Androidsis
Android Pie bụ onye ọrụ gọọmentị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ọnwa, enwere ụdị ndị na -anata beta ha. Mana, a ka nwere ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ụdị na -echere mmelite ahụ na Android Oreo. Abụọ n'ime ekwentị ndị a bụ Moto G5 na G5 Plus, abụọ n'ime ọkọlọtọ etiti Motorola. Ọ dabara nke ọma, maka ụdị ndị a, nchere agwụla.
N'ihi na ndị ọrụ nwere Moto G5 ma ọ bụ G5 Plus na -amalite ịnata mmelite na gam akporo Oreo. Obere oge ndị ọrụ nwere otu n'ime ụdịdị etiti a nọ na-eche nwa oge.
Companylọ ọrụ ahụ n'onwe ya ekwenyelarị na mwepụta nke mmelite maka ndị ọrụ. Nke a bụ mmelite na -agbasa n'ụwa niile na ọkwa dị iche iche. Yabụ, dabere na obodo onye ọrụ ọ bụla, ọ nwere ike were obere oge ịbata.
Ma N'ime ụbọchị ndị a niile, ndị ọrụ nwere Moto G5 ma ọ bụ G5 Plus ga -enwe ike ịnụ ụtọ gam akporo Oreo na ngwaọrụ gị. Mmelite ekwenyela ga -esi na OTA gaa na ekwentị. Ya mere, ọ bụ okwu ichere ka ọ bịarute.
Tinyere mmelite ahụ na gam akporo Oreo, Moto G5 na G5 Plus ga -enweta nkwalite ụfọdụ. N'ime ha anyị na -ahụ njikwa batrị ka mma yana arụmọrụ ekwentị n'ozuzu ya ka mma. Ihe ndị a bụ nkwalite ekwesịrị ịhụ site na mgbe ewebatara ha na ekwentị.
Anyị enweghị ụbọchị a kapịrị ọnụ maka mbata mmelite a na Moto G5 na G5 Plus. Enweela ụfọdụ mba ebe ewepụtara mmelite a, ọ dịkwa ka nke a ga -abụ omume na ụbọchị na -abịa. Yabụ na ọ dịghị ka ọ ga -ewe ogologo oge ịbụ onye ọchịchị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Gam akporo nsụgharị » The Moto G5 na G5 Plus na-amalite na-enweta gam akporo Oreo